ကြောင်ပျံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကြောင်အူငယ် (Melogale moschata)
ကြောင်ပျံ (ခေါ်) ကြောင်အူ (အင်္ဂလိပ်: Ferret-badgers) ဆိုသည်မှာ နို့တိုက်သတ္တဝါ မျိုးစုတစ်စုဖြစ်ပြီး "ဝံပုလွေ/ ခွေးအသွင်ရှိသတ္တဝါ" ကာနီဖော်မီယာ (Caniformia) မျိုးစဉ်ငယ်ထဲမှ ဖြစ်သည်။ ကြောင်ပျံ၏ သိပ္ပံအမည်မှာ "မဲလိုဂေလ် (Melogale)" ဖြစ်ပြီး Mustelidae ၏ မျိုးရင်းခွဲ Helictidinae မှတစ်ခုတည်းသော မျိုးစုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းမျိုးစုတွင် မျိုးကွဲ မျိုးစိတ် (၆)ခုရှိသည်။
ကြောင်အူငယ် (သို့) တရုတ်ကြောင်ပျံ
ဂျာဗားကြောင်ပျံ ( Melogale orientalis )
ကြောင်အူကြီး (သို့) ကြောင်ပျံ (မြန်မာကြောင်ပျံ)
↑ "Revision of the genera and species of Mustelidae contained in the British Museum" (1865). Proceedings of the Zoological Society of London 33: 100–154. doi:10.1111/j.1469-7998.1865.tb02315.x.
↑ သစ်တောဦးစီးဌာန (၀၄-၀၃-၂၀၂၀)။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ (PDF) (in မြန်မာဘာသာ) စာ-၂၃။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန။ ၀၃-၁၁-၂၀၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wozencraft၊ W.C. (2005)။ "ကာနီဗိုရာ မျိုးစဉ်"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 532–628။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ Koepfli, K.-P. (February 2008). "Multigene phylogeny of the Mustelidae: Resolving relationships, tempo and biogeographic history ofamammalian adaptive radiation". BMC Biology 6. doi:10.1186/1741-7007-6-10. PMID 18275614.
↑ Yu, L.. "On the phylogeny of Mustelidae subfamilies: analysis of seventeen nuclear non-coding loci and mitochondrial complete genomes". BMC Evol Biol 11. doi:10.1186/1471-2148-11-92. PMID 21477367.
↑ Nascimento, F. O. do. "On the correct name for some subfamilies of Mustelidae (Mammalia, Carnivora)". Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo) 54. doi:10.1590/0031-1049.2014.54.21.
↑ Law, C. J. (2018-01-01). "Lineage Diversity and Size Disparity in Musteloidea: Testing Patterns of Adaptive Radiation Using Molecular and Fossil-Based Methods". Systematic Biology 67. doi:10.1093/sysbio/syx047. PMID 28472434.
↑ "A new species of ferret-badger, Genus Melogale, from Vietnam" (2011). Der Zoologische Garten 80 (5): 271–286. doi:10.1016/j.zoolgart.2011.08.004.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြောင်ပျံ&oldid=718799" မှ ရယူရန်